Dhaqanka Soomaaliyeed waa dhaqan hodan ku ah sheeko xariirta ay sameeyaan af-shaxanno ku xeeldheer mu’allifnimadda dhinaceeda tiraabta. Qayb Libaax iyo sheekadii Habar Dugaag ee uu abwaankii garaaddo goyska ahaa, waa Xuseen-Dhiqle ee, billadda gabayga ku hantiyey, Suul Baruur, Juuq Dhagayste, Dhig Dhexe Jabiye, Dhag Dheer, Araweelo iyo Oday Biiqe, in yar uun aan xusnee, ayaa ka mid ah sheeko xariirta caanka ah. Waxaa kale oo uu dhaqankeenu la ciirayaa sheekooyin xaqiiqi ah oo jiilba jiil usoo gudbiyey, sheekooyinkaa oo aad u xikmad badan. Middan aan maanta kugu soori doono waxay ka mid tahay noocaa dambe.
Nin dadka aad u imtixaana oo isku daya inuu qof walba garashadiisa dhudhumiyo ayuu ahaaye, maalin maalmaha ka mid ah ayuu shir weyn wacay oo uu isagu yeedhay odayaashii Bartire. Wuxuu codsaday in nin walba oo soo gaadhi kara shirka yimaado. Il-laawe iyo lug-laawe kol ay ku tahay, Bartire wixii akabaabiga ka dhawaa ayaa isu yimid. Af-niijiye (qof dadka warka gaadhsiiya siddii makarafoonkii) ayuu idmay oo intuu shirkii ka dhex kacay faray in nin walba gurigiisii ku noqdo, shirka barrito la isugu imanayana uu keeno “cadka rag walaaleeya.” Raggii shirka yimid oo yaaban oo war tolow maantana muxuu arintan cusub uga jeedaa is leh ayaa dib u geddoomay.
- Shanta qaaradood waxa ka riday, qayladiyo buuqa